Shiinaha oo Tayada Sare leh ee Korantada hore loo sii hagaajiyay ee Weelka Weelka Weelka-shengte Soo saarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha |Shengte
Qalabka Korantada ee Tayada Sare leh
Substation-ka hore loo rakibay (sidoo kale loo yaqaan transformer sanduuqa Yurub), oo waafaqsan heerarka GB/T17467-1998 iyo IEC1330, rakibid dabacsan oo habboon, khasaare yar, buuq yar, wareeg gaaban iyo iska caabin xad dhaaf ah.
Waxay ku habboon tahay xarumaha ganacsiga, degmooyinka la dego, warshadaha iyo warshadaha macdanta, isbitaallada, dugsiyada, garoomada diyaaradaha, saldhigyada, dekedaha, tareenada dhulka hoostiisa mara iyo meelo kale.YBM iyo YBP waa laba nooc oo qaabaynta.
Qaab dhismeedka substation waa qaabaynta "isha" ama "alaabta".
Qalabka qolofka alaabtu waa saxan aluminium aluminium ah, saxan bir ah, saxan isku dhafan, saxan sibidh oo la xoojiyay, iwm.
Saldhigga saldhiggu wuxuu ka samaysan yahay birta kanaalka galvanized ama sibidhka oo leh iska caabin daxaleed oo xoog leh iyo xoog farsamo oo ku filan.
Daboolka sare ee sanduuqa sanduuqa wuxuu qaataa qaab-dhismeed laba-lakab ah, kaas oo leh kuleylka kuleylka wanaagsan, ilaalinta shucaaca iyo saameynta hawo-qaadista.
Qol kasta oo ka mid ah substationka waxaa lagu kala saaraa saxan bir ah, qol kastana waxaa lagu qalabeeyaa qalab nalal ah.G ee ugu sarreeya ee transformer-ku waxa uu ku qalabaysan yahay qiiqa qiiqa oo toos ah si loo hagaajiyo
Midabka santuuqa waa dabacsanaan waxaana lala xiriirin karaa deegaanka ku xeeran.
Substation prefabricated (oo sidoo kale loo yaqaan isbeddelka sanduuqa Yurub), oo la jaan qaadaya GB/T17467-1998 heerka iyo heerka IEC1330, rakibaadda dabacsan, khasaare yar, buuq yar, iska caabin adag oo wareeg gaaban iyo culeys xad dhaaf ah.Lagu dabaqi karo xarumaha ganacsiga, guryaha la dego, warshadaha iyo warshadaha macdanta, isbitaalada, dugsiyada, garoomada diyaaradaha, saldhigyada, dekedaha, tareenada dhulka hoostiisa mara iyo meelo kale.Waxaa jira laba qaab oo kala ah: Erayga font (YBM) iyo nooca font (YBP).
Joog: ≤ 1000m;
Xawaaraha dabaysha: ≤ 34m/S (aan ka badnayn 700pa);
Heerkulka deegaanka: heerkulka ugu badan +40℃, heerkulka ugu yar -35℃;
Qoyaanka qaraabada ah: celceliska maalinlaha ah kama badna 95%, celceliska bishiina kama badna 95%;
• Shockproof: dardargelinta toosan kama badna 0.4m/s2,Dardargelinta toosan kama badna 0.15mm/s2;
U janjeerta goobta rakibidda: aan ka badnayn 3°;
Deegaanka lagu rakibo: Lagu rakibay meel aan dab ka jirin, halis qarax, wasakh halis ah, daxal kiimikaad iyo gariir daran.
Haddii aad ka gudubto shuruudaha kor ku xusan, waxaad kala xaajoon kartaa shirkadda.
· Xajmi yar, qaab dhismeed is haysta oo fudud in la rakibo.
Sifada wax soo saarka:
A. Qaab dhismeedka saldhiga hoose waxa loo habeeyey qaabka "mesh" ama "alaabta".
B. Qalabka qolofka alaabtu wuxuu ka samaysan yahay saxan aluminium aluminium ah, saxan bir ah, saxan isku dhafan, fiber galaas oo lagu xoojiyay guddiga sibidhka, iyo wixii la mid ah.
C. Saldhigga saldhiggu wuxuu ka samaysan yahay birta kanaalka galvanized ama sibidhka, kaas oo leh iska caabin daxaleed oo xoog leh iyo awood farsamo oo ku filan.
D. Daboolka sare ee golaha wasiiradu wuxuu qaataa qaab-dhismeed laba-lakab ah, kaas oo leh kulayl wanaagsan, shucaac iyo saameyn hawo.
E. Qol kasta oo ka mid ah saldhigga waxaa ka soocay qolka madax-bannaan ee istaroogga.Qol kastaa waxa ku qalabaysan qalab nalaleed.Dusha sare ee qalabka wax lagu beddelo waxa lagu rakibay qalab qiiqa hawada toosiya si uu u hagaajiyo heerkulka qolka beddelka.
F. Sanduuqa midabkiisu waa dabacsan yahay waxaana lala xiriirin karaa deegaanka ku xeeran.
Fiiro gaar ah: cabbirka wax soo saarka iyo miisaanka waa xog wakhti go'an waxaana laga yaabaa inay isbeddelaan sababtoo ah hagaajinta naqshadeynta.
Hore: Qiimaha ugu Wanaagsan Qalabka Kubadda Korantada ee Hoose GCS Alaabta-shengte MOQ 1pcs
Xiga: Kala beddelka OEM Isku-dhafka ah ee Sanduuqa Korontada Nooca Beddelka leh Qiimaha Warshadda-shengte
Transformer nooca Ameerika
Kala beddelka OEM Isku-dhafka Sanduuqa Korontada Nooca Tr...
Transformer nooca yurub
Qiimaha ugu Wanaagsan Sanduuqa Cusub Transformer Professional Tra...